अबको चार महिनापछि नेपालमा कोरोना विरुद्धको सु´ई प्रयोगमा – Daily NpNews
नारायणी का´ण्ड: घरवेटी आईन मिडियामा, बुढाबुढीको मेरै अगाडी झ´ग´डा भयो/उनी ना´रायणी ति´र ग´ईन। (भिडियोसहित)
दुइ मिनेट मै यसरी बनाउनुहोस् पहेलो दाँत चम्किलो
अभिनेत्री जयश्री कोठामा मृत अवस्थामा फेला
२६ बर्षिया शिक्षिकाले गरिन् १४ बर्षे बालकसँग अनैतिक कार्य, पछि दुबै यस्तो अवस्थामा पुगेपछि परिवार स्त’ब्ध
अहिले यी पुरानो नोटको भाउ लाख भन्दा पनि बढी छ ! भयकोले तुरुन्तै यसरी बेचौं ! कहाँ कसरी ? बेच्ने तरिका..हेर्नुहोस्”
अनिशाको साथी पहिलोपटक मिडियामा, २० दिनपछि कन्चनको आमा घरपुग्दा गाउँमा यसरी भए जम्मा (हेर्नुस्
राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको स्मरणमा ‘राजारानी’ रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अबको चार महिनापछि नेपालमा कोरोना विरुद्धको सु´ई प्रयोगमा
अबको चार महिनापछि नेपालमा कोरोना विरुद्धको सु´ई प्रयोगमा
कोरोना भाइरसविरुद्धको २ करोड ५० लाख डोज खोप नेपाल ल्याइँदै छ । रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड र नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनी ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सबीच खोप नेपालमा भिœयाउने सम्झौता भएको हो । नेपालमा ल्याइने भनिएको ‘स्पुतनिक–५’ भ्याक्सिन ‘ह्युमन एडेनो भाइरल भेक्टर्स प्लेटफर्म’ मा आधारित छ ।
हाल रुसलगायत देशमा ४० हजार नागरिकमा भ्याक्सिनको तेस्रो चरण अर्थात् थर्ड ट्रायल भइरहेको छ । सो सफल भए आगामी माघसम्म नेपालमा भ्याक्सिन ल्याइने ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘४० हजार नागरिकमा खोप परीक्षण सफल भए औषधि व्यवस्था विभागमा लाइसेन्सका लागि निवेदन दर्ता गर्छौं । यदि सबै प्रक्रिया पूरा हुँदै गए आगामी माघसम्म नेपालमा भ्याक्सिन आइपुग्छ ।’
भ्याक्सिन नेपाल ल्याउन सरकारले अनुमति दिनुपर्ने भए पनि हालसम्म कुनै पनि खोप ल्याउन आयातकर्ताले औषधि व्यवस्था विभागमा निवेदन नदिएको पाइएको छ । ‘स्पुतनिक–भी’ को तेस्रो चरणको परीक्षण आगामी जनवरीभित्र पूरा हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । नेपालमा कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन प्रयोगका लागि औषधि व्यवस्था विभागमा निवेदन दिनुपर्छ ।
रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड र नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनी ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सबीच २ करोड ५० लाख डोज रुसी भ्याक्सिन ‘स्पुतनिक–५’ नेपाल ल्याउने सम्झौता भएको रसियन डाइरेक्ट फन्डको वेबसाइटमा उल्लेख छ । भ्याक्सिन सन्दर्भमा ट्रिनिटीले गत जेठदेखि पहल गर्दै आएको थियो ।
फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० किरिल डिमिट्रेभले ट्रिनिटीसँग भएको सम्झौताबाट नेपालका ९० प्रतिशत जनसंख्याका लागि पुग्ने गरी भ्याक्सिन उपलब्ध हुने जानकारी दिए । २ करोड ५० लाख भ्याक्सिनले नेपालको ९० प्रतिशत जनासंख्यालाई समेट्ने बताइएको छ । भ्याक्सिन नेपाल ल्याउन सरकारले अनुमति दिनुपर्ने भए पनि हालसम्म कुनै पनि खोप ल्याउन आयातकर्ताले औषधि व्यवस्था विभागमा निवेदन नदिएको पाइएको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले अहिलेसम्म खोप ल्याउन कसैको पनि निवेदन नपरेको बताए । उनले भने, ‘यस बारेमा जानकारी आएको त छ । तर, कसैले पनि खोप आयात गर्न अनुमति लिनुभएको छैन ।’ हाल कोरोना भाइरसविरुद्ध १ सय ४० वटा खोप परीक्षणको चरणमा रहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार रुसी भ्याक्सिनलाई डब्ल्यूएचओले स्वीकृत नगरेको र अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ । दोस्रो चरणको परीक्षण पूरा हुनासाथ गत साउन अन्तिम साता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले कोरोनाविरुद्ध रुसले पहिलो भ्याक्सिन बनाएको घोषणा गरेका थिए । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित गरिएको छ ।
दिनको ७५ हजार तिरेर मेयर शाक्य पत्नी र छोरासहित पाँचतारे होटल सोल्टीको आइसोलेसनमा
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ?
अब सकियो कोरोनाको त्रास, पहिलो सफल परीक्षण भएको खोपले ९० प्रतिशत सुरक्षा दियो
सल्यानमा भेटिएको बेवारिसे शिशुकी आमाको पहिचान खुल्यो,यस्तो रहेछ छोड्नुको कारण….!